Hammangaawwam Man'ee Gingilchuu
Gingilchaawwan baay'ee hammangaawwan maadhee wardiilee keessatti gingilchuuf fayyadamuu dandeessa. Gingilchaan durtii dirqaalaalee kan deetaa gingilchuuf ifteessite fayyadama. Gingilchaan ufmaa deetaa akkaataa gatii ykn diraa murtaa'eetti gingilcha. Gingilchaan olaanaa ulaagaa gingilchaa maadheelee murtaa'an irraa fayyadama.
Gingilchaa durtii hammangaa man'eetti raawwadhu.
Hammangaa maadhee keessatti cuqaasi.
Gulaali - Gingilchi - Gingilchaawwan durtii fili.
Qaaqa Gingilcha Durtii keessatti,dirqaalaalee gingilchaa barbaaddu ifteessi.
Galmeewwan kan dirqaalaalee gingilchaa ifteessite faana wal siman ni mul'atu.
Ufmaan gingilchaa hammangaa maadheetti raawwachuuf
Hammanga maadhee ykn kuusaa deetaa keessatti cuqaasi.
Yoo ufmaan gingilchaa baay'ee wardii tokkotti raawwachuu barbaadde,jalqaba hammangaawwan kuusaa deetaa qindeessuu qabda,achiin ufmaan gingilchaa hammangaawwan kuusaa deetaa irratti raawwadhu.
Deetaa - Gingilcha - Ufmaan gingilchifiladhu.
Qabduun xiyyaa hammangaa kuusaa deetaa keessatti mataa sarjaa hundaatti dabalama.
Qabduu xiyyaa sarjaa kan gatii ykn diraa isa ati akka ulaagaa gingilchaatti kaa'uu barbaaddu qabatu cuqaasi.
gatii ykn diraa akka ulaagaa gingilchaatti fayyadamuu barbaaddu filadhu.
Galmeewwan kan ulaagaa gingilchaa filatte guutan ni mul'atu.
Gingilchaa hammangaa maadhee irraa haquuf
Hammangaa maadhee gingilchamanii keessa cuqaasi.
Title is: Hammangaawwam Man'ee Gingilchuu